Iinkcukacha zokuSetyenziswa kwaBantu abaDala abaSebenzayo kunye nee-Intanethi, amanani, kunye neziBalo | Martech Zone
NgoLwesibini, Julayi 30, 2019 NgoLwesibini, Julayi 30, 2019 UNikola Djordjevic
I-stereotype abantu abadala abangakwaziyo ukuyisebenzisa, abayiqondi, okanye abafuni ukuchitha ixesha kwi-Intanethi igcwele kuluntu lwethu. Nangona kunjalo, ngaba isekelwe kwizibakala? Kuyinyani ukuba i-Millennials ilawula ukusetyenziswa kwe-Intanethi, kodwa ngaba ngokwenene zimbalwa iiBantwana Boomers kwiwebhu ebanzi?
Asicingi njalo kwaye sele siza kuyingqina. Abantu abadala bayamkela kwaye basebenzise itekhnoloji yale mihla ngokwanda kwamanani kule mihla. Bayaziqonda izibonelelo zokufunda ukusebenzisa ii-laptops, ii-smartphones, kunye ne-dab kwinyani yokwenyani.
Nazi iinyani ezibonisa ubunyani bendlela izizukulwana ezindala kuluntu lwanamhlanje ezisebenzisa ngayo i-Intanethi.
Zingaphi kwaye zingakanani
Inani labadala kwi-Intanethi liphezulu kakhulu. Ngokufanelekileyo, ubuncinci i-70% yabantu abaneminyaka eyi-65 nangaphezulu bachitha ixesha kwi-intanethi mihla le.
Ngokomndilili, isizukulwana esidala sichitha iiyure ezingama-27 kwi-Intanethi ngeveki.
Medalerthelp.org, Abantu abadala kunye neWebhu yeHlabathi yeWebhu
Ngapha koko, abantu abadala bafumene eyona nzuzo ye-Intanethi-ukufikelela simahla kulwazi olungenamda! Ke ngoko, uphando lubonisa ukuba ubuncinci Iipesenti ezingama-82 zabantu abadala zisebenzisa iinjini zokukhangela ukufumana ulwazi ngezihloko abanomdla kuzo.
Uninzi lwabadala lujonga iMozulu
Esinye sezizathu eziphambili zokuba abantu abadala baye kwi-Intanethi kukujonga imozulu (malunga ne-66%). Kuyinyani eyaziwayo ukuba umntu okhulileyo uya eba novakalelo ngakumbi xa usiya kutshintsha ngokukhawuleza kweemeko zemozulu, ngoko ke ukujonga kwi-Intanethi yindlela elungileyo yokuhlala uzilungiselele.
Nangona kunjalo, abantu abadala basebenzisa i-Intanethi ukuhambisa ezinye izinto ngokunjalo. Ezinye zezona ziqhelekileyo zibandakanya ukuthenga, ulwazi malunga nokutya, imidlalo, amakhuphoni kunye nezaphulelo, kunye nezinye izizathu.
Ngaba abantu abadala baNxibelelana nge-Intanethi?
Olunye uhlobo esinoluvo ngabantu abadala abasingqongileyo kukuba basathembele kwiminxeba yokunxibelelana nabahlobo babo kunye neentsapho zabo. Ngelixa kuyinyani kwabanye, ayixhaphakanga njengoko abanye becinga.
Ezona ndlela zintathu zonxibelelwano kwi-Intanethi yi-imeyile, ii -apps zemiyalezo, kunye namaqonga eendaba ezentlalo. Phantse iipesenti ezingama-75 zabantu abadala banxibelelana namalungu osapho kusetyenziswa ubuncinci imiyalezo yemiyalezo. Ezona zimbini zixhaphakileyo zi-FaceTime kunye ne-Skype kuba zenza kube lula kakhulu ukunxibelelana nevidiyo nokuthumela imifanekiso.
Zeziphi izixhobo ezisetyenziswa kakhulu?
Nangona sihambe indlela ende ekuziseni abantu abadala kunye netekhnoloji kufutshane, kusekho indawo yokuphucula. Umzekelo, iiselfowuni eziqhelekileyo zihlala zixhaphakile kwizizukulwana ezindala xa kuthelekiswa nee-smartphones. Ukunyuka okuphezulu kwinqanaba lobudala, kokukhona umsantsa phakathi kokusetyenziswa kweeselfowuni kunye nee-smartphones ziba.
Umzekelo, i-95% yabantu abaneminyaka eyi-65-69 basebenzisa iiselfowuni, ngelixa i-59% isebenzisa ii-smartphones. Nangona kunjalo, I-58% yabo baneminyaka engaphezulu kwe-80 basebenzisa iiselfowuni, kodwa yi-17% kuphela esebenzisa ii-smartphones. Kubonakala ngathi ii-smartphones zisoyikisa abantu abadala, kodwa ezi zinto ziya kutshintsha kungekudala.
La manani kulindeleke ukuba akhule kwixa elizayo
Amanani ahambelana ne-Intanethi kunye nabantu abadala bayakhuthaza kakhulu. Nangona kunjalo, kulindeleke ukuba zikhule ngokukhawuleza kungekudala. Njengokuba izizukulwana ezisencinci esele zinomyalelo olungileyo wetekhnoloji yale mihla ziguga, ipesenti yabantu abadala abafundileyo kwezobuchwephesha iya kukhula nayo.
Ngolwazi oluthe kratya kwesi sihloko, jonga oku kulandelayo kulungiselelwe Unyango.
tags: Ukusetyenziswa kwe-intanethimanani efowuni ephathekayoukusetyenziswa kwefowuniumhlai omdlala
UNikola Djordjevic, MD, iNtloko yomxholo kwi CasaNgcali.org. Ukuza evela eSerbia, uNikola ngugqirha kwezamayeza oqale le projekthi kwi-2018 ngenxa yokuthanda kwakhe ukunceda abanye, ngakumbi abantu abadala. Ngaphandle kokujonga iinkqubo zokulumkisa kwezonyango, ubhala nebhlog yakhe enikezelwe kwezempilo, ukwaluphala, umhlala phantsi, kunye nezinye izihloko ezinxulumene nabantu abadala.